Triangle United: Sizaphatheka Kumncintiswano weCAF
Iqembu elinqobe kumqhudelwano wenkezo yeChibuku Super Cup eleTriangle United lithi lizaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi leAfrica oweCAF Confederations Cup.
Iqembu leli libe ngelesine ukuphakamisa inkezo yeChibuku selokhu yavuselelwayo ngomnyaka ka2014 ngemva kokutshaya eleHarare City nge2 ka nya ngoMgqibelo.
Umgcinisihlalo weqembu leTriangle uLovemore Matikinyidze utshele intathelizindaba ukuba iqembu lakhe lizaphatheka kumncintiswano weCAF Confederations League, okulilungelo eliphiwa iqembu eliphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup.
Kusenjalo umqeqetshi weHarare City uMark Harrison ukhale ngokudlalela eGibbo ekupheleni komdlalo ngoMgqibelo esithi lokhu kudlale indima ethile ekunqotshweni kweqembu lakhe.
“Thina ungasifanisa nje labantu abakade bedlala ibhola lensimbi ngoba ngokusiletha ukuthi sizodlalela enkundleni yeGibbo bahle bathuthukisa amathuba eTriangle ngoba kuvele kuyinkundla yabo lapho abalabalandeli abanengi khona futhi,” kutsho uHarrison.
“Bekumele lumdlalo udlalelwe enkundleni yeBarbourfields kumbe eMandava ukuze sonke singabi ngekhaya.”
Esephendula umqeqetshi weTriangle uTawurayi Mangwiro uthe kuvele kuvamile kulumncintiswano ukuba kube leqembu elidlala lingekhaya kufinal njengoba lalo eleHarare City nyakenye liphakamise inkezo lidlala lingekhaya.
“Akuqali ngathi lokhu okwenzakeleyo ngoba lami ngisaqeqetsha iqembu leHarare City sinqobe sidlala singekho ngekhaya sitshaya iqembu leDynamos ikanti labo nyakenye bebedlala besekhaya kodwa iqembu le ow Mine kalizange likhonone,” kutsho uMangwiro.
“Laphambilini njalo iqembu leNgezi Platinum Stars liphakamise inkezo lidlala lingakibo eBaobab ikanti leleFC Platinum lalo liyiphakamise lidlala lingakibo eMandava.”
Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup, iqembu leTriangle lithole inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombissa lanhlanu njengomvuzo wokuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup.
Iqembu leHarare City lona lithole inkulungwane ezingamatshumi amahlanu njengomvuzo wokuphutsha lisendaweni yesibili.
Amaqembu aphume kusigaba sama semi-finals azathola inkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu kuthi lawo aphelele kuma quarter-finals azathola inkulungwane ezingamatshumi amabili kuthi lawo ahle aphelelwa ngumphako kusigaba sakuqala somncintiswano azathola inkulungwane ezilitshumi lanhlanu.